DEAD WARFARE: Zombie 1.8.0.47 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.8.0.47 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ DEAD WARFARE: Zombie
DEAD WARFARE: Zombie ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Dead Warfare - ထိုဖုတ်ကောင်ဂိမ်းပရိတ်သတ်တွေအားလုံးအတှကျစွဲလမ်းဖုတ်ကောင်သေနတ်ပစ်ဂိမ်း!
ဒါဟာတစ်နှစ် 2072 ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကမ္ဘာဖုတ်ကောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်။ လူသားတွေဟာမြေအောက်နှင့်စွန့်ပစ်အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်းမောင်းနှင်ခဲ့ကြသည်။ MPS သည်-16 အမည်ရှိအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးအုပ်စုတစ်စုကအခြားအသကျရှငျကလူစုဆောင်းရန်လိုသည်။ သူတို့ကဖုတ်ကောင်သတ်ပစ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့် shooters ကိုရှာဖွေကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာပါတယ်။
ရေဒီယိုကနေသတင်းအချို့သိပ္ပံပညာရှင်များနေဆဲတစ်နေရာရာမှာထွက်အဲဒီမှာနေထိုင်နေကြသောသူတို့ကိုပြောပြတယ်။ ဒါကြောင့် MPS သည်-16 ဆေးဝါးလူသားတို့ကိုကယ်ဖို့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်သောမျှော်လင့်ချက်အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်များကယ်ဖို့ထွက်တတ်၏။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူသေချိုင့်ကဒီအလွန်အန္တရာယ်များသောခရီးများအတွက်ပစ်မှတ်ဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ဖုတ်ကောင်များ၏အလုံးအရင်းကပြတိုက်အတွက်ပိတ်မိနေချိန်တွင်အဆိုပါစွန့်စားမှုဆိုးဆိုးရွားရွားစတင်ခဲ့သည်။ MPS သည်-16 အနည်းငယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်လက်နက်နှင့်အတူသေလွန်သောသူတို့သည်ညဥ့်မှတဆင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကဤအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူပြင်းပြင်းထန်ထန်၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ကိုယုံကြည်စေသည်ရာထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့စစ်ဆင်ရေးကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ကစတင်ခဲ့သည်။
Dead Warfare: Zombie features တွေအများကြီးနဲ့အစွန်းရောက်ဖုတ်ကောင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပါသည်:
- သေနတ်ပစ်ဂိမ်းထဲမှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူရှိအတိုငျး-ရှာဖွေနေ 3D ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။
- ဒါကစစ်မှန်တဲ့ FPS ရှုထောင့်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
- အသေကောင်ကိုပစ်မှတ်တိုက်ပွဲများအခြား shooters Save နှင့်အသစ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်လက်နက်ကိုရှာပါ။
- အတိုငျးအလင်းရောင်နှင့် texture ပစ္စုပ္ပန်ဇာတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်, သေနတ်နှင့် FPS ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။
- 3D ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဖုတ်ကောင်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းကိုပိုပြီးရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနည်းဗျူဟာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရူပနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစနစ်များရှိသည်။
- Guns 3D mode မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နှင့်များစွာသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
- Zombies နဲ့ Boss ကွဲပြားခြားနားသောအပြုအမူများနှင့်အရည်အချင်းများရှိသည်။
- ဤ FPS ဂိမ်းမှာတော့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဇာတ်ကောင်လူတန်းစားအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
- သေနတ်အများစုကအမျိုးအစားများကို 3D အတွက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
- သေနတ်ပစ်သေနတ်များဒီ Zombie သေနတ်ပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
- FPS ကစားသူသေနတ်ပစ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကိုရှာဖွေများစွာသောအသေသောအရပ်တို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ: http://bit.ly/officialpageDWZ မဆိုဒုက္ခရှိပါကသင်သည် asap အဒ်မင်အတူ chat နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့် SD ကဒ်၏အကြောင်းအရာဖတ်ရန်: တိုးချဲ့ဂိမ်းအရင်းအမြစ်ဖိုင် (.obb) ဖတ်ပါ။
ကိရိယာပေါ်ရှိအကောင့် FIND: ဂိမ်းမှရဲ့ login များအတွက်သတင်းအချက်အလက်အကောင့်ရ။
external storage ရေးပါ: ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေကိုဆုလာဘ်ကစားသည်။
DEAD WARFARE: Zombie အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
DEAD WARFARE: Zombie အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
DEAD WARFARE: Zombie အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
DEAD WARFARE: Zombie အား အခ်က္ျပပါ
omuhayar66 စတိုး2751
DEAD WARFARE: Zombie ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း DEAD WARFARE: Zombie အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.8.0.47
ထုတ်လုပ်သူ VNG GAME STUDIOS
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://tool.zombie3d2m.g6.zing.vn/policy/MobilePrivacyPolicy-DeadWarfare.html
လက်မှတ် SHA1: B4:93:D0:24:2C:BC:72:64:BB:09:3F:14:4A:84:2D:BC:19:4D:97:BD
အဖွဲ့အစည်း (O): VNG
DEAD WARFARE: Zombie APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ